Abantu abayisithupha abagoqela amapholisa labogatsha lwabacuphi, amaCIO, bamiswe emthethwandaba eHarare ngoLwesihlanu besetheswa icala lokusebenza loNkosazana Henrietta Rushwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide.
Abasolwa laba bagoqela uMnu Ali Mohamad ongusomabhizimusi uRushwaya athi nguye umnikazi wegolide kanye lamapholisa amabili uMnu Paul Chimhungu loSupretendent Shoko.
Abanye njalo nguMnu Stephen Chenjerai Tserayi loMnu Raphios Mufandauya abangamaCIO kanye loMnu Gift Karanda, obikwa waqamba amanga ukuthi laye ungumcuphi.
Phezu kwecala lokuzama ukuphuma elizweni efihle i6kg zegolide elibiza imali ephezu kweUS$300,000, uRushwaya laye umiswe emthethwandaba esetheswa icala lokuzama ukufumbathisa amapholisa ambophayo lokutholakala elegolide ngaphandle komthetho.
Kusenjalo, umsekeli weMDC obesehlale esitokisini okwenyanga phose ezimbili uMnu Terrence Manjengwa uze wakhululwa ngoLwesihlanu ngemva kokuvunyelwa ngumahluli weHigh Court uJustice Erica Ndewere ukuthi ahlawule imali yesibambiso i-bail engamadola azinkulungwane ezinhlanu, Z$5000.
UManjengwa ubotshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo labanye ababili ngesikhathi bephandle komthethwandaba belande ukuyakuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla seMDC Alliance uMnu Job Sikhala.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uJustice Ndewere usole umantshi owala ukukhulula uManjengwa ngebail esithi wehluleka ukuhambisa kuhle umthetho.